Kudutshulwe kwalinyazwa iphoyisa KwaMaphumulo | Eyethu News
Kudutshulwe kwalinyazwa iphoyisa KwaMaphumulo
“Abegasele komunye umuzi ezpofuna iuzibhamu ezingekho emnthethweni.”
LINGENISWE esibhedlela iphoyisa elithole ukulimala ngesikhathi owesilisa evulela ngenhlamvu kumaphoyisa endaweni yaKwaNyamazane KwaMaphumulo, esifundeni seLembe.
Ngokusho kokhulumela amaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natal uCaptain Nqobile Gwala lesi sigameko senzeke izolo ngoLwesine, ngesikhathi amaphoyisa ophiko lwe-iLembe Cluster Task Team kanye nawophiko lwe-Empangeni Public Order Policing, etheleka kule ndawo ukuzocinga izibhamu ezingekho emthethweni.
UGwala uqhube wathi ngesikhathi amaphoyisa efika emuzini womsolwa, aye athola isibhamu sohlobo lwe-9mm kanye nezinhlamvu eziyisithupha.
“Ngesikhathi amanye amaphoyisa esalindile ngaphandle komuzi, kuvele kwaqhamuka umfowabo womsolwa maqede wangabe esabuza, wavulela ngenhlamvu ebhekise emaphoyiseni. Ngesikhathi kudutshulwana, iphoyisa elilodwa liye lathola ukudubuleka ekhwapheni, kwathi umfowano womsolwa yena wathola ukulimala eqakaleni,” kuchaza uCaptain Gwala.
Bobabili laba abalimele baye baphuthunyiswa esibhedlela, nokuyilapho umfowabo womsolwa eqashwe khona ngeso lokhozi ngamaphoyisa. UGwala uthe kulindeleke abasola bobabili bavele enkantolo yemantshi yaKwaMaphumulo khona maduze, nokuyilapho umsolwa wokuqala ezobhekana khona necala lokutholakala nesibhamu kanye nezihlamvu okungekho emthethweni, kuthi umsolwa wesibili yena abhekane necala lokuzama ukubulala.
Umkhuzi wamaphoyisa osabambile esifundazweni saKwaZulu-Natal, uMajor General Bheki Langa, ushayele amaphoyisa ihlombe ngokuboshwa kwabasolwa, wabuye wafunga wagomela wathi amaphoyisa azoqhubeka nomkhankaso wokuqoqa zonke izibhamu ezingekho emthethweni kuso sonke isifundazwe.
Kudutshulwe kwafa osolwa ngokubulala